महिला हिंसाविरूद्ध मण्डली पछ्याउन योग्य नमूना बन्नुपर्छ । | Nepali Christians
March 8, 2017 2:28 pm by: Admin Category: Articles A+ / A-
“तपाईंको त बिहे नै भएको रहेनछ, त्यसैले मेरा पीडा, वेदना र भोगाईहरू तपाईंले बुझ्नुहुन्न होला …..।” मतिर एकछिन घोरिएर हेरेपछि बल्लबल्ल आँट गर्दै एकजना दिदी बोलिन् । महिला हिंसा सम्बन्धी छलफल चलाउँदै गर्दा आफूलाई सम्हाल्न नसकी रोएकी एकजना दिदीले अभिमुखिकरणपछिको छुट्टै कुराकानीका क्रममा यी कुरा मलाई भनेकी हुन् ।
करिब १२, १३ वर्ष अगाडि म एक गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत हुँदा मकवानपूर जिल्लाका धेरैवटा गा.वि.स.का महिलाहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर पाएकी थिएँ । महिला शसक्तिकरण परियोजनाअन्तर्गत महिला दिदीबहिनीहरूको आर्थिक र सामाजिक शसक्तिकरणको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा सहभागी हुनुपर्ने जिम्मेवारी थियो । त्यही शिलशिलामा एकदिन समविकास (Geder) तालिमको लागि म र एकजना साथी करिब १० घण्टाको पैदल यात्रापछि एउटा गाउँमा पुगेका थियौं । त्यही गाउँमा जाँदा उनै दिदीसँग भेट भएको थियो ।
कामको शिलशिलामा धेरैपटक शहरी वातावरणमा हुर्केका र त्यतै बसोवास गर्ने सामान्यदेखि नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरुसँग पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा सहकार्य गर्ने अवसरहरू पाएँ । जतिसुकै ठूलो स्थानमा पुगेर सामाजिक अभियानमा लागे तापनि आफ्नो श्रीमानलगायत् घरका सदस्यहरू, आफन्तहरूबाट मानसिक हिंसा खेप्नुपरिरहेको अनुभवहरू सुन्ने, सुनाउनेहरूको भीडमा कहिलेकहीँ त आफू हराएको जस्तो महसूस हुन्थ्यो । वेदनाहरू, यातनाहरू, हिँसाका प्रकारहरू फरक–फरक हुन्थे तर गाउँ, शहर, धनी गरिब अधिकांश महिलाहरूले पीडा भोगरिहेकै पाउँथे ।
ओहो ! विवाह गर्नु नहुने रहेछ । विवाह गरेमा हिँसा भोग्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोचाई मेरो सोझो मानसपटलमा नआएको पनि होइन । तर फेरि जब म आफ्नो घर फर्कन्थे मेरी आमालाई हेर्थें र आफैलाई फेरि सान्त्वना दिन्थें ।
अर्काको घरमा जाने जात भनेर छापलागेको मान्छे, नभन्दै १५ वर्षमा नै मेरो बुवासँग विहे गरिदिनुभएछ । “मैले त पढ्न पाईनँ तर म मेरो छोराछोरीहरूलाई धोको पुग्ने गरी पढाउँछु” भन्ने अठोट मनमा लिएर विहे गर्नुभएछ आमाले । फलस्वरूप उहाँको ईच्छा पुरा गर्न होला म (जेठी छोरी) लाई उमेरै नपुगी विद्यालय भर्ना गरिदिनुभो । उहाँको ईच्छा त्यतिमा नै सिमित राख्नुभएन, मलाई हात समातेर लेख्न र पढ्न सिकाउनको लागि समय पनि निकाल्नुभयो । छोरी भएर जन्मेकै कारणले अभिभावकले देखिने गरी गरेको विभेदका कारण उहाँलाई साह्रै पीडा भएको रहेछ त्यसैले म उहाँको पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी भएर जन्मे तापनि “अर्काको घरमा जाने जातलाई धेरै पढाउनु हुन्न” भन्ने मान्यताबाट टाढा रहनुभयो । प्रतिफलको रूपमा म १५ वर्षको उमेरमा नै एसएलसी परिक्षा दिन योग्यको हुने वातावरण मिलाई दिनुभयो जसको कारण कागजमा मेरो उमेर १ वर्ष बढाउनुपर्ने भयो । फेरि उहाँको उत्कट ईच्छा त्यतिमा नै सिमित राख्नुभएन । एसएलसी पास भएपछि अब छोरीलाई के र कसरी पढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो आफन्तहरु मध्ये अलि पढेलेखेको नजिकको व्यक्तिसँग सल्लाह लिन जानुभएको पनि मलाई थाहा छ । मलाई उमेर नपुग्दै विवाहको लागि कहिल्यै पनि जबर्जस्ती गर्नुभएन ।
सामाजिक क्षेत्रमा ८ वर्षको अनुभवपछि एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा सुदुर पश्चिमको एउटा जिल्लाको प्रमुखको रूपमा मेरो नियुक्ति हुँदा म निकै उत्साहित थिएँ । केही महिनापछि साथीहरूसँग जिल्लामा भेटघाट गर्न जाने क्रममा नै बस्नको लागि डेरा खोज्ने योजना तय भएको थियो । लामो समय डेरा खोजियो तर पाईएन । बेलुकीपख मात्र थाहा पाएँ कि त्यस ठाउँमा महिलाहरूले महिनावारी हुनेबेलामा पानी÷धारा आदि चलाउँछन् भनेर घरधनीहरुले महिलालाई डेरा दिन हत्तपत्त मान्दैनन् भनेर । हिम्मत नहारीकन हामी अर्को दिनपनि डेरा खोज्न हिड्यौं । फलस्वरूप एक घरमा म लगायत अन्य २ जना महिला साथीहरूलाई डेरा दिने पक्का भयो । केही समयपछि हामी हाम्रो डेरामा बस्न सुरू गर्यौं । त्यतिबेला त्यस ठाउँमा डेरीको दुध नपाउने भएकोले गाईभैंसी पालेका धेरै घरहरूमा दुध किन्न भनेर हामी गयौं । फेरि त्यहाँ पनि महिला भएकै कारणले उनीहरूले हामीलाई दुध दिन नसक्ने जानकारी गराए । केही महिनाको अथक प्रयासपछि एक घरबाट हामी ३ जना साथीहरूले नियमितरूपमा दुध पाउन थाल्यौं ।
व्यक्तिगत सोचाई र व्यवहारमा सन्तुलन:
धेरैपटक परिवारका सदस्यहरूले दिएको सल्लाह सुझावलाई श्रीमान श्रीमतीहरूले नकारात्मक र आफूप्रति हिँसा भएको ठानी डिभोर्ससम्म पनि भएको घटनाहरू हामी माझमा प्रशस्त छन् । “म साथीहरूसँग हिँड्दा, घुम्न जाँदा मैले केही गल्ती नगरे पनि मेरो श्रीमानले मलाई कस्तो टर्चर दिनुहुन्छ, कुनै काम परेर अरुको मोटरसाईकलमा चढ्यो भने बेस्सरी गाली गर्नुहुन्छ । म त अब सँगै बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकें । त्यसैले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु ल” भनेर एकजना दिदीले मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यो घटनामा पनि एकजना श्रीमानले यसो नगर्नु भनी आफ्नो श्रीमतीलाई दिएको सुझावले हिंसाको रुप लिँदैथियो । यसो एकछिन सोचें यदि साथीहरूसँग हिँडेको, घुमेको र अरूको मोटरसाईकल चढेको आफ्नो श्रीमानलाई मन पर्दैन भने त्यस्ता व्यवहार दोहोर्याउनुको साटो वचनअनुसार श्रीमानको आदर गरेर साथीहरुसँग घुम्न जानुको साटो परिवारसँग जाने, साथीहरूसँग जाँदा श्रीमानलाई पनि लैजाने । अरूको मोटरसाईकलको साटो सार्वजानिक सवारी साधनको प्रयोग गर्ने । हुनसक्छ भने श्रीमानले श्रीमतीलाई माया गरेर सकेसम्म आफ्नै मोटरसाईकलमा पुर्याउने गरेमा समस्याले ठूलो रूप लिन पाउँदैन ।
यो त एउटा सानो व्यवहारिक पाटोलाई समेटेको प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यी र यस्ता हिंसाजस्तो लाग्ने व्यवहारहरू परमेश्वरको वचनअनुसारको जीवनले चाहिँ हाम्रो मन मस्तिष्क र घरमा प्रवेश गर्न दिँदैन । म र मेरो श्रीमान हामी दुवैजना एकले अर्कालाई कुनै अपर्झट योजना बाहेकको समयमा अफिसबाट कतै अलमल गरेर रातीराती आउनुभन्दा सकेसम्म समयमा नै घरमा आएर परिवारसँग समय बिताएको चाहन्छौं । यदि यसलाई हामीले एकअर्काप्रति गरिने मानसिक हिँसा र अरूको ईसारामा चल्नुपरेको जस्तो गरी लिन्छौं भने परिणाम पनि नराम्रो आउँछ । यदि यसलाई वचनअनुसार एकले अर्कालाई आदर र वास्ता गरेको हो भनी लिन्छौं भने हाम्रो सम्बन्धबाट परमेश्वरले महिमा लिनुहुन्छ र हाम्रो सोचाई र व्यवहारलाई परमेश्वरको वचनअनुसार सन्तुलन राख्नका लागि अझ बढी अनुग्रह पाउन सक्छौं ।
त्यसैले मण्डलीमा यस्ता व्यवहारिक शिक्षाहरू, व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामूहिकरूपमा अगुवाहरूबाट निरन्तर दिईरहनु जरुरी छ र यो कुरालाई नियमितरूपमा फलोअपहरू गरिनु पनि जरुरी छ, जसको कारण हिंसा सम्बन्धी व्यक्तिगत सोचाई र व्यवहारलाई परमेश्वरको वचनअनुसार सन्तुलन र अनुशासनमा राख्न थप टेवा पुग्नेछ ।
मण्डली एक पछ्याउन योग्य नमुना:
महिला हिंसाविरूद्ध मण्डली पछ्याउन योग्य नमूना बन्नुपर्छ । Reviewed by Admin on Mar 08 . “तपाईंको त बिहे नै भएको रहेनछ, त्यसैले मेरा पीडा, वेदना र भोगाईहरू तपाईंले बुझ्नुहुन्न होला .....।” मतिर एकछिन घोरिएर हेरेपछि बल्लबल्ल आँट गर्दै एकजना दिदी बोलि “तपाईंको त बिहे नै भएको रहेनछ, त्यसैले मेरा पीडा, वेदना र भोगाईहरू तपाईंले बुझ्नुहुन्न होला .....।” मतिर एकछिन घोरिएर हेरेपछि बल्लबल्ल आँट गर्दै एकजना दिदी बोलि Rating: 0
ख्रीष्टियन समाजद्वारा कुलमान घिसिङ...आत्मिकि लोडसेडिङ र भ्रष्टचारी चर्च...